Ny football, Fampiraisana Ny Fiaraha-Monina Ao Nizera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2013 0:51 GMT
Firenena manana velarantany indroa avo heny noho i Frantsa i Nizera, ahitana faritra valo sy foko enina samihafa. Izay ihany koa no firenena manana famantarana ny fampandrosoana ny mahaolona maivana indrindra tamin'ny 2012. Ireo kasinga samihafa ireo no mety hampalemy ny rafi-piaraha-monina noho ny fitomboan'ny hantsana (ara-toekarena) sy ny fahasamihafan'ny mponina. Ny fanatanjahantena matetika no fitaovana idealy ho fanamafisana ny fifandraisana ara-tsosialy ao amin'ny fiaraha-monina ao Nizera. Izany no antony mahatonga ny Kaominina ao Kalfou ao amin'ny departemantan'i Tahoua manomana fifaninanana football isan-kerintaona ihaonan'ny ekipa samihafa ao amin'ny departemanta.
Nandray anjara tamin'io fifaninanana io i Hamzajaba, mpandray anjara amin'ny tetikasa Rising Voices Andao Hataontsika Sarintany i Nizera, ka nitantara :
Nankafizin'ny Nizeriana hatrany ny football. Mpilalao football taloha ny iray amin'ny olona fanta-daza indrindra any Nizera, Moussa Kanfideni, izay kapitein'ny ekipam-pirenena tamin'ny taona 80. Tsy maty intsony ny anarany tamin'ny fananganana foibem-pampiofanana ara-teknika voalohany ho an'ny sangany eo amin'ny football rahatrizay, ny Souley Académie Sports (SACA-Sports). Ousmane Keïta manazava ny anjara toeran'ny ivon-toeram-pampiofanan'ny football amin'ny ankapobeny eo amin'ny fitaizana ny tanora nizeriana :
Misy ny akademia hafa najoro, tahaka ny Atcha académie, mikendry ny hamolavola ny tanora nizeriana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Tahaka izany ihany koa, vao najoro tao avaratr'i Niamey, renivohitr'i Nizera, ny ivontoerana teknikan'ny Federasiona nizeriena Football (FENIFOOT). A Niamey manazava ny tanjon'io ivontoerana io :